Shuruudaha adeegga - Sendfiles.online
U dir feyl
Waad ku mahadsan tahay adeegsiga Sendfiles.online!
Hoos waxaad ka heli doontaa turjumid adag oo ku saabsan shuruudaha adeeggeena oo ku qoran Ingiriis iyo siyaasaddeena asturnaanta ee Ingiriisiga xagga dhinacyada sharciga, labadaba waxay ku dalbanayaan keliya Ingiriisiga.
Markii aad gashid websaydhka https://sendfiles.online, waxaad aqbashay inaad ku koobnaato shuruudaha adeegyadan, dhammaan shuruucda iyo qawaaniinta lagu dabaqi karo, waxaadna oggolaatay inaad mas'uul ka tahay addeecista qawaaniinta maxalliga ah ee khuseeya. Haddii aadan oggolayn w
2. Isticmaal laysan
Ogolaansho ayaa loo oggol yahay inuu si ku meelgaar ah u soo dejiyo hal nuqul oo ah qalabka (macluumaadka ama softiweerka) websaydhka 'Sendfiles.online' ee loogu talagalay shakhsi ahaan, ganacsi aan ahayn ganacsi ku-meel-gaar ah. Kani waa deeq liisanka, maahan wareejin cinwaan, iyo t
wax ka beddel ama nuqul ka sameysan qalabka;
u isticmaal qalabka ujeeddooyin ganacsi kasta, ama wax kasta oo dadweyne soo bandhiga (ganacsi ama ganacsi la'aan);
isku day inaad dumiso ama aad u beddelatid injineer wixii software ah oo kujira websaydhka 'Sendfiles.online';
ka qaado wixii xuquuq ah ama ogeysiisyo hanti gaar ah oo agab ah; ama
Alaabada ugu wareeji qof kale ama 'muraayad' agabka kumbuyuutar kale.
Ruqsaddan ayaa si otomaatig ah u joojin doonta haddii aad ku xadgudbeyso mid ka mid ah xannibaadahaan oo waxaa laga yaabaa in lagu joojiyo Sendfiles.online wakhti kasta. Markaad joojiso aragtidaada agabkan ama marka la joojiyo rukhsadan, waa inaad wax kasta baabi'isaa
3. Nidaamka Kaydinta
Sendfiles.online waxay kaydisaa faylasha 48 saacadood. Halkaas oo faylasha la tirtiro. Faylasha waxay la xiriiraan cinwaan email ah oo soo geliyay. Haddii emayl la geliyo si loo diro kaas isagana waa la keydinayaa. Haddii faylalka loo diro halka laga keenay isticmaale PRO, shuruudo kaladuwan ayaa jira oo waxaa lagu tusi doonaa bogga isku xirka soo degsiga.
Qalabka ku jira websaydhka 'Sendfiles.online' waxaa laga helayaa aasaaska 'sidoo kale'. Sendfiles.online ma samayso dammaanad qaad, lama muujin karo ama lama huraan karo, oo halkan bay ku siidaynaysaa oo iska indhatiraysaa dammaanadaha kale oo dhan oo ay ku jiraan, iyada oo aan la xadidin, damaanadyada la taaban karo ama loo yaqaan 'condi'
Dheeraad ah, Sendfiles.online ma dammaanad qaadeyso ama ma sameyso wax matale ah oo ku saabsan sax ahaanta, natiijooyinka suurta gal ah, ama isku halleynta isticmaalka agabyada websaydhkeeda ama haddii kale la xiriira agabkaas ama bogag kasta oo ku xiran boggan.
Dhacdo kasta looma diri doono Sendfiles.online ama alaab-qeybiyeyaasheeda ayaa mas'uul ka ah wixii khasaaro ah (oo ay ku jiraan, iyadoon la xadidin, waxyeelada xogta ama macaashka, ama hakadka ku yimid ganacsiga) ee ka soo baxa isticmaalka ama karti la'aanta u adeegsiga ashyaa'da Sendfiles.o
6. Saxnimada qalabka
Agabyada ka muuqda websaydhka 'Sendfiles.online' waxaa laga yaabaa inay ku jiraan khaladaad farsamo, qoraal ama khalad sawir ah. Sendfiles.online ma ballanqaadayso in wax ka mid ah walxaha ku yaal degelkooda ay sax yihiin, dhammeystiran yihiin ama hadda yihiin. Fariimaha loo diro
Sendfiles.online dib uma ay eefin dhamaan boggaga ku xiran boggeeda mana mas'uulna kama aha waxa ku jira bog kasta oo isku xiran. Ku darista xiriirin kasta macnaheedu maahan in la oggolaado shabakadda Sendfiles.online. Adeegsiga websaydhka noocaas oo kale ah
8. Wax ka beddelidda
Sendfiles.online waxaa laga yaabaa inay dib u eegaan shuruudaha adeeggan ee degelkooda wakhti kasta ogeysiis la'aan. Adigoo adeegsanaya websaydhkan waxaad oggolaatay inaad ku xidho nooca hadda ah ee shuruudaha adeeggan.
9. Sharciga Xukunka
Shuruudahan iyo shuruudahan waxaa xukuma oo loo dhisayaa si waafaqsan shuruucda 'Connecticut' isla markaana si sharci darro ah ayaad ugu gudbineysaa awooda u gaarka ah maxkamadaha gobolkaas ama meeshaas.
© 2021 Sendfiles.online v1.15 | 75,266 Faylasha loo diray ilaa 2020